पहिरो पीडितलाई २५ लाख सहयोग- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ३, २०७७ आश गुरुङ
काठमाडौँ — पहिरोबाट घरबारबिहीन लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-३ तरापु पल्लोटारीबासीका लागि लमजुङ समाज युकेले २५ लाख ९० रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
गत साउन पहिलो साता भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले पल्लोटारीका २१ घर पुरिएका थिए । ५० घर उच्च जोखिममा छन् । पहिरो पीडितका लागि दीर्घकालीन बासास्थान बनाउन लमजुङ घर भइ बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले राहत सहयोग गरेका हुन् ।
लमजुङ समाज युकेका सल्लाहकार, तमु धीं युके साथै गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका पूर्वअध्यक्ष मुछेत्र गुरुङ र लमजुङ समाज युकेका आजीवन सदस्य क्या. मीनजंग गुरुङले उक्त रकम बराबरको चेक तरापु पल्लोटारी विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा मस्र्याङ्दी ३ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरे । राहत संकलनका संयोजक क्या. देवबहादुर घलेले २ सय ८४ जनाबाट राहत रकम संकलन गरी पहिरोपीडितका लागि पठाएको बताए । ‘तरापु पल्लोटारीमा पहिरो गएर घरबार लगेपछि हामी बैठक बस्यौं ।
पूर्व सांसद जमीन्द्रमान घलेले पल्लोटारीमा पहिरो गएपछि देशविदेशमा सहयोग माग गरिएको बताए । ‘देशविदेशबाट सहयोग आइरहेको छ । सरकारले तत्काल राहतका लागि रकम उपलब्ध गराओस् । गाउापालिकाले छिट्टै जग्गाको टुंगो लगोओस् । अनि हामी सवै घर बनाउन जुटौंला’ उनले भने ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले पीडितलाई तत्कालका लागि अस्थायी टहरामा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘स्थायी रुपमा बसोबासका लागि हामी अघि बढेका छौं । संघ र प्रदेशसँग पनि सहयोग मागेका छौं । छिट्टै जग्गा व्यवस्थापन गर्छौं । बर्खा अगाडि सवैलाई स्थायी बसोबासका लागि स्थानान्तरण गराउँछौं’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले संघीय सरकारबाट हरेक घर निर्माणको लागि ३ लाख रुपैयाा प्राप्त हुने बताए । प्रदेश सरकारबाट १ लाखदेखि डेढलाख रुपैयाँसम्म सहयोग प्राप्त हुने अनौपचारिक खबर आएको बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १७:०९
भीम अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द
कार्तिक ३, २०७७ माधव ढुंगाना
भैरहवा — चिकित्सकलगायत अस्पतालका धेरैजना कर्मचारी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएपछि भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा ओपीडि सेवा बन्द गरिएको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिृकत डा.नारायण पोखरेलले चिकित्सकलगायत ११ जना कर्मचारी संक्रमित भएपछि काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालेकाले ओपीडी सेवा बन्द गर्नु परेको बताए । उनका अनुसार ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय अस्पताल प्रशासनले आइतबार गरेअनुरुप सोमबारदेखि कार्यान्वयन भएको हो ।
‘एकातिर धेरैजना कर्मचारी संक्रमित भएकाले जनशक्तिको अभाव हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ कर्मचारी बिचमै एकअर्कालाई सर्ने जोखिम धेरै भयो,’ उनले भने, ‘दसैंका कारण ६ गतेपछि त्यसैपनि ओपीडी सेवा बन्द हुनेवाला थियो ।’ चिकित्सक, नर्स, प्रशासनका कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीहरु संक्रमित हुन पुगेको उनले बताए ।
ओपीडी सेवा दसैंसम्मका लागि बन्द गरिएको हो । प्रसूती सेवा, आकस्मिक कक्ष, ड्रेसीङ, इन्जेक्सनको सेवा भने बन्द हुने छैन । कोरोना अस्पतालतर्फको सेवा पनि खुला छ । भीम अस्पतालमा हिजोआज दैनिक सरदर १ सय ५० जना बिरामीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १६:५३